Uthe sebelulwe lolu daba kusuka ngo-2013 emva kokuba uMengameli Jacob Zuma esayinde isigunyazo sokubonelelwa kwezinduba kodwa kuze kube imanje azikaholelwa izinduna.
“Lokhu kusho ukuthi izinduba zikweletwa imiholo ka-2013, 2014 no-2015. Akukho neyodwa induna eholelwayo lapha KwaZulu-Natal kodwa ziyaholelwa kwezinye izifundazwe.
Uthe okunye abakudingayo beyizinduna izinsiza-kusebenza.
“Uthola ukuthi imikhandlu inamakhompuyutha kodwa awekho amaphepha okuwasebenzisa kanti futhi awanakekelwa aze agcine esehlupha.
“Kanti futhi sifuna omabhalane bemikhandlu baqashwe uhulumeni ngokugcwele njengoba kwenzeka kwezinye izifundazwe. Hhayi lokhu kokuthi imikhandlu ayizikhokhele yona laba basebenzi,” kubeka uMthethwa.
Uthe imikhandlu ayinamali ngoba ayikho imali oyiqoqa kwizakhamizi. Uveze ukuthi uma bebuza umnyango ngokungaholelwa kwabo, uthi awanayo imali njengoba lesi sifundazwe sinezinduna eziningi ngaphezu kwezinye.
Uphinde waveza ukunengeka kwabo beyizinduna emva kokuba bebizelwe emhlanganweni ka-6 June obekuthiwe uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nobuHoli beNdabuko KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube, uzokhuluma nabo kuwo kodwa akangafika.
“Iminyaka emithathu balukho besitshela ukuthi basafuna imali yokusiholela. Thina sithi abasitshela ukuthi sebethole malini kusuka kuleso sikhathi kuze kube manje khona bezo beqala besiholela. Kodwa bavela bathi ayikho esikhona,” kusho uMthethwa.
Uthe sebewachazele wonke amakhosi ngomshikashika wabo wokuthi bafune ukuholelwa nokuthi bathole isabelo-mali ukuphatha imikhandlu.
Okhulumela umnyango uLennox Mabaso uqala akangafuna ukukhuluma okudlula ukuthi sebezitshelile konke okufanele bazitshele khona izinduna.
Kodwa ubuye wathi imali abayikweleta izinduna nje iyodwa ilinganiselwa ku-R400 million.
“Asinayo leyo mali. Futhi uma sekufanele siqhubeke sizikhokhele zinyanga zonke sizodinga uR500 million. Inkinga wukuthi ziningi kakhulu izinduna KwaZulu-Natal,” usho kanje.
Uthe hhayi ukuthi abafuni ukuzikhokhela kodwa imali engekho njengoba beselinde umphumela wesicela sabo sale eMnyangweni weziMali kuzwelonke.
“Ithina esaba yisifundazwe sokuqala eNingizimu Afrika ukhokhela izinduna engakamemezeli ngisho ukumemezela umengameli ukuthi ziholelwe.
“Saziniki imihlomulo (stipends) ka-R1 300 umuntu. Uma sesinayo futhi imali zingayithola ngisho ngakusasa imali yazo,” kusho uMabaso